Archive du 20171220
Marc Ravalomanana “Tsy misy mafy be izany eto”
Samy manaja tsara ny lalàmpanorenana sy ny tany tan-dalàna dia vita soa aman-tsara ny fifidianana ary tsy misy ny krizy, hoy i Marc Ravalomanana manoloana ny fanontanian’ny mpiara-miombon’antoka sy ny masoivoho vahiny.
Fananan’ny mpitondra sy mpanao politika Tsy misy fanaraha-maso ny eto Madagasikara
Navoakan’ny fahefana ambony momba ny fangaraharana eo amin’ny fiainam-bahoaka (HATVP) any Frantsa ny faran’ny herinandro teo ny fanambaram-pananana nataon’ireo mpikamban’ny governemanta Frantsay.
Manajà tena amin’izay !
Manao ahoana ry Jean a ! Mbola misonanina hatrany any an-dapa ve hatramin’izao ka tsy mahalala ny fahasahiranam-bahoaka e ?
Andoharanofotsy Ny mamo indray no niantso zandary
Ara-bakiteny ilay fitenenana manao hoe “mamo miantso polisy” raha ity tranga iray niseho teny Andoharanofotsy.
Soavinandriana Itasy sy ny vina CLD 2017 “Caserne” zandary sy « commissariat de police » no hatao
Nambaran’ny depiote Harinosy Rabenerika Charlot voafidy tany amin’ny distrikan’i Soavinandriana Itasy fa anisan’ireo vina hotanterahina ao anatin’ny CLD 2017 hatao any amin’ny distrika misy azy ny fananganana “caserne”
Fanampiana ho an’ny firenena mahantra Nomen’ny FMI 44,5 tapitrisa dolara i Madagasikara
Tsy maintsy hibitaka indray ny mpitondra HVM satria tonga tahaka ny fanomezan’i Dadabenoely ny vola fanampiana mitentina 44,5 tapitrisa dolara, izany hoe efa ho 144 miliara ariary mahery avy amin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI).
Fahalafosan’ny vidim-bary Mamono afo amin’ny alalan’ny serasera ny fanjakana
Henjana ny serasera ampiasain’ny fitondram-panjakana hoenti-mivoy sy miresaka, fa tena nitady vahaolana mba hampidinana ny vidim-bary tokoa ny mpitondra.
Ankatoky ny fety Maro ny tokantrano sahirana ara-bola
Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny tokantrano Malagasy hatramin’ny fitondrana tetezamita no ho mankaty. Nihena na tsy manana tetibola hiatrehana ny fety akory ny ankamaroan’izy ireny amin’izao dimy andro tsy hahatongavan’ny fetin’ny krismasy izao raha araka ny fanadihadiana natao.
FJKM Katedraly Analakely Lasa adihevitra be ny fampiatoana ny mpitandrina
Misy olom-bitsy miisa 11 eo, hoy ny fanehoan-kevitry ny diakona iray ao amin’ny FJKM Katedraly Analakely no tsy mahazaka ny asa sosialy ataon’ny mpitandrina ao an-toerana ankehitriny,
Kianja mitafo Soavita - Toamasina Nahazo fitaovana manara-penitra
Tao anatin’ny fanatanterahana ny “Tounoi basket veterans "Lakana tsara voha" notontosain’ny ligin’ny basiketin’Atsinanana ny faha-15 sy 16 desambra teo ka nahazoan’ny ekipa vehivavin’ny JCBA Analamanga
Verezina fa tsy herezina
Tsy vao izao akory no nandrenesana fandrebirebena saim-bahoaka. Raha ny zava-mitranga ankehitriny kosa dia efa tsy mijanona eo amin’izay intsony no hita rehefa tena manaraka ny fandehan’ny vaovao rehetra avy eto an-toerana fa verezina tanteraka sy dontoina anaty fahantrana mihitsy ilay vahoaka kely miha safotry ny fahantrana andro aman’alina.
Airtel Madagascar sy ny ASM Efa-taona niadivana tamin’ny Vih /SIDA
Efa-taona nifanomezan-tanana iadiana amin’ny otrikaretina Vih/ SIDA sahady ny orinasam-pifandraisana Airtel Madagascar sy ny Association d’Aide et Soin aux Malades (ASM) tarihin’ny profesora Mamy Randria, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny hopitalim-panjakana Befelatanana eny ambony.
IT UNIVERSITY Namoaka informatisiana avo lenta 124 mianadahy
Niampy 124 mianadahy indray ireo informatisiana avo lenta eto amintsika. Mpianatra navoakan’ny IT University eny Andoharanofotsy izy ireo ka ny 97 mianadahy notolorana ny mari-pahaizana Licence misalotra ny anarana “Raitra”
Paolo Emilio R « Misy ny zandary lasa dahalo manara-penitra »
Maro ny tantsaha mpiompy sy mpamboly no mitaintain-dava sy mbola miafina any anaty ala noho ny tahotra ny asan-jiolahy na fanafihan-dahalo.
Nifanafika ny Zazamainty sy Zazamena 4 no maty tao Mandoto
Miseho ny efa nampoizina momba ireny fikambanana milaza ho miady amin’ny dahalo ireny any Vakinankaratra.
Manjakaray Nitifitra ny jiolahy dia nitsoaka
Nirefodrefotra ny basy ary raim-pianakaviana 1 no nokendrena notifirina, raha ny nambaran’ireo nanatri-maso. Voa teo amin’ny tongony izy. Lonilony sa sotasota tsotra izao ? Nisavoritaka tetsy Manjakaray an-tampon-tanàna, tokony ho tamin’ny 9 ora latsaka fahefany alin’ny alatsinainy teo.
Nanome baiko ny baiko ny sefo distrika ny praiminisitra mba hifampiresaka sy hifandamina amin’ireo olo-be ao Ikongo ary hanasazy ireo tompon’antoka rehetra tamin’ny zavatra nitranga tany Ikongo : fikasàna hanao fitsaram-bahoaka, famakiana fonja.